Realme GT, te handrava ny vavahadin'ny avo [Review] | Androidsis
Miguel Hernandez | | About us, hevitra
Araka ny fantatrao tsara, niara-niasa izahay Realme hatramin'ny nahatongavany tamim-pomba ofisialy tany Eropa, rehefa nanatrika ny hetsika tohodrano voalohany tany Madrid izahay ary nahazo hevitra momba ny halehiben'ny hevitr'i Realme mba hiezahana ho «mpanova lalao» amin'ny lafiny kalitao sy ny vidin'ny vokatra .
Ny Realme GT vaovao dia tonga miaraka amina endri-javatra avo lenta ary misy vidiny mirary mba hametrahana azy ho safidy marani-tsaina amin'ity 2021 ity. Andao hojerentsika lalina ity Realme GT vaovao ity, ny endriny ary raha tena miaraka amin'ity terminal ity ny Realme dia afaka mijoro amin'ny Samsung, Apple ary Oppo izay hiarovan-tena tsara indrindra, ireo finday "ambony".
Toy ny mahazatra dia mamela horonantsary iray eo an-tamponay izahay ahafahanao mijery ny fanadihadianay, satria efa nandinika an'ity Realme GT vaovao ity izahay nandritra ny roa herinandro.
1 Famolavolana marika iray
2 Toetra mampiavaka ny teknika: misy zavatra tsy ampy ve?
3 Fampisehoana an-tsary sy multimedia
4 Fahaleovan-tena sy sary
5 Ny fehin-kevitray
Famolavolana marika iray
Realme dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny famolavolana azo fantarina ampy hahafantarana fa mifandraika amin'ny fitaovana sonia isika, saingy vita tsara mba hahatsapany fa lafo indrindra. Manana sisiny somary boribory izahay, rindrina plastika izay maka tahaka ny vy, ary lamosina vera izay miditra ao amin'ny masontsika. Azontsika atao izany amin'ny karazany telo lehibe, dia ny volafotsy / kristaly, mavo misy tarika mainty mahatalanjona izay mampatsiahy antsika momba an'i Kill Bill, ary amin'ny manga manga izay hita taratra. Toy ny mahazatra, ny tapany aoriana dia manana faniriana manokana hisambotra ny lalantsika.
Eo an-tanako, ny mavomavo kinova vita amin'ny hoditra vegan dia mahatalanjona, fihodinana mahaliana izay miteraka fahatsapana mifangaro rehefa hitako fa vita amin'ny plastika ilay endriny.
Any Espana dia azo vidiana amin'ny mavo sy manga ihany izy
Manana refy 158 x 73 x 8,4 isika ho an'ny lanjany maivana be 186 grama fotsiny, zavatra tsy ampoizina raha jerena ny tontonana efa ho 6,5 santimetatra. Eo am-pelatanana dia mahatsiaro tena ho tsara izy na dia misy refy aza. Eo anoloana dia ananantsika ny "freckle" mahazatra eo amin'ny faritra havia ambony izay mamorona fakantsary selfie ho an'ny fampiasana miavaka amin'ny efijery. Toy ny mahazatra dia manana tranga fiarovana ao anaty boaty isika, zavatra izay mora ampiasaina foana.
Toetra mampiavaka ny teknika: misy zavatra tsy ampy ve?
Mazava ho azy fa manasongadina ny Qualcomm Snapdragon 888 5G fanta-daza fanta-daza izahay, izay hiaraka amin'ny kinova 8 na 12 GB an'ny LPDDR5 RAM ary ny fitehirizana ny hafainganam-pandeha avo indrindra miaraka amin'ny 128 na 256 GB an'ny fahatsiarovan'ny UFS 3.1 izay manatsara tokoa ny famindrana data.
Famaritana ara-teknika Realme GT
efijery SuperAMOLED 6.43 "FHD + (2400 * 1080) miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz sy 1000 nits
Tahiry anatiny 128/256 UFS 3.1
Fakan-tsary aoriana Sony 64MP f / 1.8 IMX682 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP Macro f / 2.4
Fakan-tsary aloha 16MP f / 2.5 GA 78º
bateria 4.500 mAh miaraka amin'ny Fast Charge 65W
Manana fahaiza-manao WiFi 6 sy 5G miaraka amin'ny rafitra Dual SIM izahay izay tsy isalasalana fa hahafaly ny be fitakiana indrindra. Amin'ny fitsapana ataonay dia voafehy tsara ny mari-pana noho ny Rafitra fanaparitahana VC izay nampidirin'i Realme tao amin'ny tobiny, iray amin'ireo fizarana nanaitra anay indrindra.
Ny fitsapana ataonay Smart 5G Voafetra ihany izy ireo noho ny tsy fahampian'ity karazana fandrakofana ity amin'ny fotoana anaovana ny fanadihadiana.
Fampisehoana an-tsary sy multimedia
Manana tontonana izahay SuperAMOLED efa ho 6,5 inch eo ho eo dia manome famirapiratana mahatratra 1000 mits ary mety tsara mifanaraka amin'ny zavatra niainantsika tamin'ny fampiasana. Manana a Taham-pamelombelona 120 Hz izay miharihary fa misy fiatraikany amin'ny fihinanana fizakan-tena. Ny tahan'ny fanavaozana ny tontonana touch dia 360 Hz ka amin'ity lafiny ity dia ambony ny traikefa. Mba hifehezana ny famirapiratana sy hanamafisana ny fizakan-tena, Realme dia nametraka sensor roa manodidina ary ny zava-misy dia manaporofo izy ireo fa mahomby amin'ny filan'ny jiro amin'ny terminal. ny ny fampiasana efijery dia mikasika ny 92% ary amin'ity lafiny ity dia tratra tsara ny Realme GT.
Tsara ny zavatra niainantsika, Toy izany koa, amin'ny resaka feo, nahita hery sy mazava izahay ampy hahafahana mankafy ny fampiasana azy na dia eo aza ny "teknika" tsy fisian'ny feo stereo.
Fahaleovan-tena sy sary
Raha ny bateria, Miakatra 4.500 mAh amin'ny fiampangana haingana izay mindrana Realme avy any Oppo, manana 65W miaraka amin'ny charger SuperDart izahay izay tafiditra ao anaty boaty. Io dia ahafahantsika miala 0% ka hatramin'ny 100% ao anatin'ny 35 minitra fotsiny, izay toa filokana mahaliana antsika amin'izao fotoana izao. Ny terminal dia manararaotra ireo toetra miavaka amin'ny fanatsarana ny fizakan-tena, sady mampihena ny famirapiratana sy ny tahan'ny fanavaozana, ny fomba fitehirizana samihafa ary ny fihenam-bidy azo alaina amin'ny alàlan'ny USB-C OTG miaraka amin'ny fivoahan'ny 2,5W. Amin'ireo andrana ataonay, ny fizakantena dia nahatratra iray na iray andro sy sasany ny fampiasana tsy misy olana, na dia mifehy ny fangatahana amin'ny lalao video sy ny tahan'ny fanavaozana ny efijery aza.
Raha ny momba ny sensor, Tsy ho ela dia hoentinay any aminao ny famakafakana lalina momba ny fakan-tsary miaraka amin'ny fitsapana feno, mandritra izany fotoana izany dia "manokatra ny vavanao" miaraka amin'ny masontsivana sy ny fiheverana voalohany anay izahay:
Sony IMX682 sensor lehibe miaraka amin'ny 64MP sy f / 1.9 aperture an'ny singa enina
8MP Ultra Wide Angle Sensor miaraka amina aperture fivelomana f / 2.3
2MP Macro sensor miaraka amina aperture f / 2.4 telo
Manana fampiasa mahazatra toa ny Super Night Mode izay horesahinay mandritra ny fitsapana lalina ataonay, antenaina fa tsy ho diso anjara amin'izany ianao. Azontsika atao koa ny manoratra horonantsary hatramin'ny 4K 60 FPS miaraka amin'ny fanamafisana mahazatra.
Ity Realme 5G ity dia fantsom-pahalalana tsy misy na dia kely aza, malahelo ny famandrihana tsy misy tariby Qi izahay, tsy hamitaka ny tenanay, fa toa anay ihany no antsipiriany manavaka azy amin'ny terminal "Premium". Ny zava-niainan'ny Realme UI dia nopotsin'ireo bloatware sasany napetrakay teo amin'ny sehatra, fa ny fampisehoana amin'ny haavo hafainganana miaraka amin'ny lalao mitaky asa na asa mahazatra dia lozabe fotsiny. Ny telefaona koa dia tsy mafana loatra, zavatra nitranga tamin'ity fotoana ity niaraka tamin'ny terminal hafa.
Tsy nanana fanantenana firy tamin'ilay "mpamono sainam-pirenena" izay henoko izy isan-taona, fa ny tena izy dia amin'ny fihenan'ny vidin'ny Realme GT, Sarotra amiko ny miloka amin'ny safidy hafa avy amin'ny Samsung ary na ny sasany hafa avy amin'ny Xiaomi. Realme dia nanao fanoloran-tena matanjaka amin'ny laharana "avo" amin'ity GT ity, Hahomby ve ny lalao? Mbola mila manatanteraka ny "fitsapana landihazo" isika, ny fitsapana fakan-tsary izay hahitantsika tsara raha afaka miresaka momba anao amin'ny iPhone 12 Pro na Galaxy S21 Ultra ity Realme GT ity. Aza adino ny antsipirian'ny tranokalanay sy ny fantsona YouTube satria handre izany avy hatrany izahay.
Relalme GT 5G> VAROTRA
8 + 128: 449 euro miaraka amin'ny tolotra (ofisialy 499 euro)
12 + 256: 499 euro miaraka amin'ny tolotra (ofisialy 549 euro)
Hanana tolotra manokana amin'ny Amazon, tranokala Realme izahay Ary mazava ho azy amin'ny AliExpress hatramin'ny 22 Jona, miaraha mandanjalanja.
Ny fananganana vaovao sy ny fitaovana dia mahatsapa ho lafo
Hery sy hafainganam-pandeha betsaka tsy misy fanafanana
Ny famandrihana haingana dia saika maivana
Vidiny mahazatra kokoa an'ny elanelam-potoana / avo
Ny fakantsary dia miovaova fa azo hatsaraina
Tsy misy fiampangana Qi
Bloatware sasany ao amin'ny Realme UI 2.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Realme GT, te handrava ny vavahadin'ny avo [Review]
Ireo fampiharana 6 tsara indrindra handraisana naoty amin'ny Android